Buuhoodle: Qalab la gudoonsiiyey Garoonka Diyaaradaha (Sawiro) – Radio Daljir
Buuhoodle: Qalab la gudoonsiiyey Garoonka Diyaaradaha (Sawiro)
Diseembar 1, 2012 11:54 b 0
Buuhoodle, Dec 1 ,12, Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Waxaa la gaarsiiyey qalab loogu tala galay in lagu dhamaystiro dhismaha Garoonka, qalabkan ayaa ah hal Cagaf oo ah nooqa loo yaqaano Rugleyda taasoo lagu simo Garoomada iyo dhulka laga dhisayo Wadooyinka laamiga ah iyo Jidcadayaasha.
Ibraahim Saleebaan Xaaji Dayib oo kamid ah hawl wadeenada shirkad qalabka bixisay oo lagu magacaabo Mataanaha ayaa sheegay in qalabkani iyo mid kale oo soo socdaba loogu tala gallay in lagu dhamaystiro garoonka Diyaaradaha ee magaalada Buuhoodle.
Axmed Axmed Gurey oo kamid ah hawlwadeenada Garoonka ayaa dhankiisa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin qalabkan cusub ee loo keenay, Wuxuu sheegay in qalabkani waxbadan ka tari doono baahida xiligan ee Garoonka.
Buuhoodle oo ah degmo mudooyinkii danbe ay ragaadiyeen dagaalo sokeeye ayaa waxaa dhanka kale ka socdey dhismaha garoon Diyaaradeed, Waxaana garoonkaasi qabyo yahay mudo ka badan 3 sanadood iyadoo gudiga gacanta ku hayaa sheegeen in lagu dhamaystiri doono mudo 5 bilood ah.
Caawa iyo Daljir Nov 1-2012, Cabdirisaaq Cali (Silver) Daljir Galkacyo.
”Annagu masaajidda weerar kuma nihin balse ciddi naga gashaa waan ka daba galaynaa”, Gen, Muxiyadiin Axmed Muuse.